Kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Tottenham oo wada doonaya xiddig horay uga soo ciyaaray horyaalka Premier League – Gool FM
Kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Tottenham oo wada doonaya xiddig horay uga soo ciyaaray horyaalka Premier League
Haaruun May 12, 2020
(London) 12 Maajo 2020. Kooxaha kala ah Chelsea, Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa lagu soo waramayaa inay dhammaantood ka fiirsanayaan inay xagaaga u dhaqaaqaan weeraryahanka kooxda Lyon ee Memphis Depay.
26-sano jirkaan ayaa ku raaxeysanayay xilli ciyaareed kale oo muhiim u ah kooxda ka dhisan dalka Faransiiska ka hor inta uusan dhaawacmin, isagoo dhaliyay 14 gool, isla markaana bixiyey labo caawin 18 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Memphis ayaa dib u dhisay mustaqbalkiisa kaddib markii uu ku guuldareystay inuu waqti fiican la qaato kooxda Manchester United, laakiin shabakada Isbaanishka ee Todofichajes ayaa sheegeysa in ku laabashada horyaalka Ingariiska inay ku jiri karto dood badan.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands ayaa doonaya inuu ka tago kooxda xagaagan kaddib markii uu arkay inay ku guuldareysteen inay u soo baxaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda, taasoo ka dhalatay in xilli ciyaareedkii horyaalka Ligue 1 loo kansalay xanuunka Coronavirus.
Lyon ayaa fadhisay kaalinta 7-aad markii xilli ciyaareedka la kansalay, iyadoo la tirinayo boosaska haatan la joogo, taasoo la micno ah kooxda Lyon in aysan ka qeyb noqon doonin kooxaha u soo baxaya sanadka soo aaddan tartanka UEFA Champion League.
Saddexda kooxood ee London ka wada dhisan ee Chelsea, Arsenal iyo Spurs ayaa haatan qiimeynaya dalabkii Memphis waxayna rajeynayaan inuu heli karo qiimo dhimis, iyadoo qandaraaskiisa uu dhacayo dhammaadka sanadka soo socda.
Xiddiga reer Holland ayaa dhaliyay kaliya 7 gool 53 kulan uu u saftay Man United muddadii uu joogay Ingiriiska, laakiin wuxuu waqti fiican la qaatay naadiga Lyon isagoo u dhaliyay 96 gool, wuxuuna ka soo muuqday 134 kulan tan iyo markii uu ku soo biiray kooxdan.
Messi oo hoggaaminaya SHAX laga sameeyey xiddigaha kulammada ugu badan la ciyaaray Iniesta & Xavi oo ka mid ah